New York City Subways sy Buses
Ny fandraisana an'i New York any an-tanàn-dehibe angamba dia toa asa goavana. Ny fifamoivoizana sy ny vahoaka, miaraka amin'ny tahotra ny ho very dia mety hahatonga azy io ho toa manoatra loatra, nefa tsy voatery ho izany! Ny fampahalalana etsy ambany dia hanampy anao hivezivezin'ny metro sy bisy ao an-tanàna toy ny New Yorker teratany.
Torohevitra momba ny fitaterana ny metro New York City
Fampidirana ny New York Subway and Bus System
Ny fandefasana entana an-tanànan'i New York amin'ny ankapobeny dia mianjera amin'ny sokajy anankiroa: bisy sy metro.
Ho an'ny ankamaroan'ny mpitsidika, ny New York City Subway dia hitondra mora, mandaitra ary sarobidy. Ny Subways dia manompo tsara ny ankamaroan'i Manhattan sy ireo boriborin-tany hafa, saingy any amin'ireo faritra izay tsy misy ny seranam-piarandàlan'ny metro dia misy bisy afaka mahazo anao any amin'izay toerana tokony halehanao. Ho hitanao fa tena manampy tokoa ny fiara fitateram-boly raha mila mandeha any amin'ny faritra atsinanana na andrefan'i Manhattan ianao.
Ny taxi-be sy ny fiara fitateram-bahiny New York dia $ 2.75 isaky ny dia ($ 3). (Busy Express, izay manompo mivantana avy any amin'ny faritany ivelany, dia mivantana mivantana ao an-tanàna ho an'ny $ 6 isam-bolana.) Najanon'ny MTA ny "Fun Pass" iray andro iray izay nanolotra metro sy fiara fitateram-bahoaka tsy misy fetra. Ho an'ny mpitsidika mijanona mihoatra ny roa andro, afaka mividy metro tsy miankina iray mandritra ny herinandro ianao ho an'ny $ 31 na MetroCard tsy misy fetra ho an'ny $ 116.50 isam-bolana. Ny MetroCards tsy misy fetra mandritra ny 7 andro na 30 andro dia mihodina amin'ny misasak'alina amin'ny andro faha-7 na 30 andro fampiasana.
Azonao atao ny mividy MetroCards any amin'ny seranana ambanin'ny birao, vola na bola ATM / debit. Ny fividianana MetroCard vaovao (na tsy misy fetra na karama) dia mitaky $ 1 fanampiny. Fantaro fa ny bisy dia manaiky MetroCard na ny saran-dàlana mazava ao amin'ny vola madinika - ny mpamily dia tsy afaka manova. Misy ihany koa fiara fitateram-bahoaka manerana ny làlana lehibe ao Manhattan & ny Bronx izay mandoa ny saran-dalana alohan'ny handehananao handingana ny dingan'ny fidirana.
Ity dia antsoina hoe "Select Bus Service" ary ny kiosk ho an'ny mialoha ny fandoavana ny saran-dalana dia matetika no mazava sy mora ampiasaina.
Inona ny MetroCard?
New York City Subway Maps sy Routes
Amin'ny ankapobeny, ny fivezivezena any New York City dia mandalo amin'ny 2-5 minitra mandritra ny ora maika, 5-15 minitra mandritra ny andro ary eo amin'ny 20 minitra hatramin'ny misasakalina ka hatramin'ny 5 maraina.
Sarintanin'ny metro New York
Sarintany bus Manhattan (Mila Adobe Acrobat ianao raha hijery ity sarintany ity.)
Sampan-draharahan'ny Metro sy Bus (Map) ho an'ny sarin'ny fiaramanidina boribona ivelany sy ny Railway Staten Island
New York City Subway Fandaharam-potoana
Fiovan'ny toeram-piasana sy fiara bus
Raha mandeha amin'ny faran'ny herinandro ianao na amin'ny fararano alina, dia tokony ho fantatrao ny fanelingelenanana amin'ny serivisy izay mety hisy fiantraikany amin'ny dianao. Ny famoahana minitra vitsivitsy handinihana ny fiovan'ny serivisy voavolavola dia afaka mamonjy anao tononkalo iray. Tsy afaka milaza aminao aho hoe imbetsaka aho nandeha an-tsokosoko iray na roa mba haka fiaran-dalamby iray izay tokony hahatongavako any amin'ny toerana misy ahy faingana fotsiny mba hahitako fa io serivisy io dia mihantona amin'io andalana io mandritra ny faran'ny herinandro. Misy marika matetika mivezivezy ao amin'ny metro na any amin'ny bus dia mampitandrina anao amin'ny fiovan'ny serivisy, fa ny fahalalana kosa mialoha dia afaka manampy anao hanomana tsaratsara kokoa.
Trano mozika any Brooklyn
Torolàlana ho an'ny fampitandreman'ny mpampihorohoro sy ny fampihorohoroana ao NYC
Sarivongan 'ny Liberty Express - Cruise to Zephyr Yacht Harbour
9 Ireo vondrona mpanavakavaka biby ao Brooklyn: Adopt, Volunteer, No Kill
Trano famatsiam-bola tsara indrindra sy hotely miditra ao Ghana
Orlando Rabarana sy Coupons
Fifanakalozana amin'ny teti-bola: Hevitra Daty sarobidy ho an'i Vancouver, BC
7 Dos & Ampahafantaro ny Mahafantatra Momba Ny Taxi Cab avy Yellow York any Brooklyn
Ny 10 Best Music Festival Washington DC 2017
Royal National Park: Torolàlana ho an'ny mpandeha iray
Toro-làlana eo an-tampon'ny Upper West Side
Artista Paul Gauguin ao Tahiti
Tantaran 'i St. Patrick Milwaukee